Lacagta Lacagta Sare Lacagta ugu Fiican ee Lagu Wareegayo Macluumaadka laga helo Website
Octoparse waa mid faa'iido leh oo awood leh . Waxay wax ku oolin kartaa oo riixi kartaa dadaalkaaga saarista xogtaada ilaa heerka xiga. Octoparse wuxuu ku yimaadaa mid bilaash ah oo lacag ah. Iyada oo qaabka xorta ah, waxaad xoqin kartaa ilaa shan kun oo bog internet ah si deg deg ah - san jose cloud computing services.
Octoparse waxay soo aruurineysaa xogta internetka, waxayna leedahay in ka badan 150,000 oo adduunka oo dhan. Laga soo bilaabo 2014, Octoparse waxay bixisaa adeegyo farshaxan oo qoto-dheer iyo xogta ku habboon si ay u hagaajiyaan meel kasta oo loo baahdo.
Macluumaadka waxaa badanaa laga helaa Internetka oo aan qaabeysanayn. Iyada oo ah Octoparse, kaliya ma xoqin karto xogtaada laakiin sidoo kale si habboon u abaabuli kartaa. Macluumaadka la heli karo waxaa loo rogi karaa macluumaad qiimo leh, iyada oo loo mahadcelinayo dhajiska dhoobada si loogu suurtogeliyo. Qaar ka mid ah sifooyinka gaarka ah ee hoos ku xusan.
1. Wanaagsan kuwa aan barnaamijka ahayn
Octoparse waxay kuu fududeyneysaa inaad ka soo qaadato xogta internetka iyada oo aan loo marin xirfadaha barnaamijka. Qalabkani wuxuu ku habboon yahay labadaba non-coders iyo non-programers iyo si toos ah u dhigo content webka ka ah labada goobo firfircoon iyo aasaasiga ah. Intaa waxaa dheer, waxay noo ogolaanaysaa inaan ku keydino xogta qaab nadiif ah oo qaabaysan. Iyada oo Octoparse, waxaad si sahlan u soo rogi kartaa xogta habka API-ga oo aad hesho natiijooyinka la rabo.
2. Octoparse sida adeeg daruuri ah:
Octoparse waa muraayad ku saleysan dariiqo oo isku dhejisa bogag badan oo shabakadeed saacad gudaheed oo aad ku hesho natiijooyin aad doonaysid, inaad ku badbaadiso waqtigaaga iyo tamartaada. Uma baahnid inaad ka welwelisid xaddidaadyada hardware sababtoo ah qalabkan uma baahna wax dayactir ah oo shaqadiisa si joogto ah u fulin kara.
3. Kormeer qiimayaasha leh Octoparse:
Mid ka mid ah sifooyinka ugu kala duwan ee Octoparse waa in ay kaa caawiso inaad la socoto qiimaha oo isbarbardhigto alaabta kala duwan. Waxay ku habboontahay bogagga wax soo gadashada sida Amazon iyo eBay oo si sahlan uga helaya xogtaada goobta tartanka. Intaa waxaa dheer, qalabkan wuxuu xareeyaa xogta waqtiga-dhabta ah oo kaliya dhawr jeer oo kaladuwan waxayna u kaydisaa waqti badan.
4. Abuurso hogaamiyaasha:
Dhexdhexaadin, waxaad abuuri kartaa hogaamiyaasha waxayna dhisi kartaa liistadaada iibka sanadaha gudahood. Uma baahnid wax xirfad ah oo barnaamijka ah maxaa yeelay joornaaliintu waxay xoqin doonaan xog aad u ballaaran oo xog ah. Waxay kaa caawin doontaa inaad kor u qaaddo ama xayaysiiso astaantaada si aad u fiican. Iyada oo Octoparse, waxaad hagaajin kartaa istiraatijiyadaha suuq-geynta waxayna samayn karaan go'aano iyo saadaalo wanaagsan.
5. Ardayda iyo macalimiinta u wanaagsan:
Ardayda iyo macalimiinta waxay had iyo jeer ubaahan yihiin macluumaad sax ah si ay awood ugu yeeshaan cilmibaaristooda. Iyada oo ku yaalla Octoparse, waxaad xoqin kartaa bogagga intarnetka ee ugu badan ee suurtogalka ah waxayna ka heli karaan macluumaadka ebooks iyo joornaalada si fudud. Waxay kaa caawin doontaa inaad hesho xog macno leh oo la cabbiri karo marnaba.
6. Interface-iyo-Click Interface:
Octoparse waxaa ugu wanaagsan ee loo yaqaan interface-iyo-gujinta. Tiknooloojiyada barashada horumarsan ee mashiinka baranaysa waxay ku soo koobaysaa xogta xaglaha kaliya dhowr jeer. Waxaad ubaahan tahay inaad muujiso xogta aad rabto inaad xoqdo ama galiso URL bogga oo u ogolaato Octoparse shaqadiisa. Waxay qaban doontaa dhammaan hawlaha kala duwan ee shaashadda.
7. Kala fiirsashada dhammaan noocyada bogagga: